“Siyaasadu abaal gud-na way leedahay qiimayna way leedahay” Wasiirka Madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi | Hangool News
“Siyaasadu abaal gud-na way leedahay qiimayna way leedahay” Wasiirka Madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi
Hargeysa(Hangoolnews) wasiirka wasarada madaxtooyada Somaliland maxamuud xaashi cabdi waxa uu manta khubad ka jeediyey xil wareejintii aqalka madaxtooyada loogu sameeyeyafhayenkii hore ee madaxynaha Somaliland xuseen aadan cige dayr iyo sidoo kale afhayeenkii cusbaa ee dhawaan madaxwaynaha somaliland u magacaabay in uu noqdo afhayeenka madaxtooyada c/raxmaan sheikh cilmi faahiye (Shamax),
Minaasibad oo ahayd mid ay kaso qayb galeen qaybaha kala duwan ee xafiiska afhayeenka ayaa wax khudbad ka jeediyey wasiirka madaxtooyda maxmuud xaashi acbdi waxaana kamid ahaa hadaladiisii,
” Waxaan qirayaa in Xafiiska Afhayeenka Madaxtooyadu Uu kor u kac Weyn Sameeyey Mudadii uu Xuseen Dayr joogay, Shamax-na waxa laga Doonayaa inuu shaqadda Halkaas ka sii wado.”
” Farxad way ayey dhamaanteen inoo tahay inaynu maanta halkan ku sii sagootino Afhayeenkii hore ee Madaxweynaha Somaliland Mudane Xuseen Dayr, oo loo magacabay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga oo Wasaarad wayn ah, isla markaana aynu soo dhawyano Afhayeenka cusub Mudane Cabdiraxmaan Shamax oo ay xilka isku wareejiyaan munaasibadeednu waa intaa. Waan u mahad naqayaa Xuseen Afhayeenkii hore, hadda Wasiirka cusb ee Ganacsiga, waxaan illaahay uga baryayaa inuu xilka cusub ku garab galo oo ku kaalmeeyo.
Wasaaradda ganacsigu waa wasaarad aad u miisaan wayn waliba wakhtigan u baahan hogaamiye aqoon yahan ah wakhtigan oo ay Xukuumadu ku mashquul santahay in la diyaariyo heshiisyadii ganacsiga, kuwii Transit-ka, kuwii balaadhinta Dekedeena, Berbera Corridor iyo in Wadadda la sameeyo, si marsadeenu ay u noqoto mid ganacsiga Geeska Afrika qayb wayn oo hal-bawle ah ka qaadata, sidaa darteed waxa uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland u arakay inuu Xuseen kaalintaa buuxin karro.
Madaxweynuhu xisbi qudha Oday uma aha, Umadda oo dhan ayuu oday u yahay, waa Madaxweynihii qaranka, hogaamiyaha balaadhan waxa lagu gartaa inuu cafiyo karo cid shaqsiyan iskaga meel kaga dhacay. Inuu isku wadi karo bulsho kala aragti duwan oo uu kulmin karo, waa astaamaha lagu qiimeeyo, waxa laga yaabaa dhaqanka noocaas ah in dad u fahmay ama u turjuntay, malaa sanadkan cida wax cayda ayuunbaa wax halaysa,! waxaan leeyahay maaha sidaa, laakiin in qofka wanaagsani uu wax heli karo waxa ka markhaati kacaya labadan oday ee halkan fadhiya Dayr iyo Shamax. Siyaasadu abaal gudna way leedahay qiimayna way leedahay.
Wasiirka cusub kaalin muhiim ayuu inoo tagay, waa saaxiibkeen, waan ku hambalyeynayaa shaqadii uu halkan ka qabtay intii uu joogay, waxaan qirayaa in xafiiskani uu kor u kac weyn sameeyey, Shamax-na wax laga doonayaa oo wajib ku ah inuu shaqadda halkaas ka sii wado, qaranku waa aqalkaas la dhisayo oo ninba meel buu ka qaadayaa. Xafiiskani inuu xoog u shaqeeyo ayeynu doonaynaa hore ayeynu uga wada hadalnay, imikana wuu shaqeeyaa. Inuu laba shifti noqdo oo ilaa Tobanka habeenimo uu shaqeeyo ayeynu doonayaa, inaynu shaqada dardar galino oo aynu waraabino warbaahinta ayeynu doonaynaa, halkani waa halkii dalka looga talinayey, inuu warkeedu baahaa waa muhiim, waxa kale oo muhiim ah in dareenadda kala duwan ee bulshaduna ay soo gaadhana waa waajib. Shamaxna inuu hawshaas dhexda u xidho ayaan ka rajnaynayaa.”